ရတနာဝါသကျောင်း ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသ၏ သာသနာပြု လုပ်ငန်းများ 華緬三寶寺 如滿師父的弘法事項 - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on May 8, 2018 at 4:46pm
(၂ဝ၁၆)ခုနှစ်တွင် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ桃園市平鎮區貿中街51號ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြေဖိုးကို အကုန် ပေးဆပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဆက်လက်ပြီး ကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်းကို တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်ခန့် ရန်ပုံငွေ စုဆောင်းပြီးမှသာ စတင်နိုင်ပါမည်။ သို့ပါ၍
စေတီရင်ပြင်(ကြမ်းခင်း) တစ်ပေပါတ်လည်အတွက် အလှူ ငွေ 9000 NT$ ။
(3)紅磚, 砂, 石頭, 水泥, 鐵條等NT$1000/份
其餘如佛寺, 佛桌, 僧房, 門, 冷氣, 電梯等沒有限額可以隨喜功德。
၂။ ဣစ္ဆာသယ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော် ဘုရားဝတ္တကမြေ သံပန်းတံတိုင်း၊ မုခ်ဦး။ (ဇီးပင်ကန်ရွာ၊ တောင်သာ၊ မန္တလေး၊ မြန်မာ)
滿願佛塔　土地, 圍蘺, 正門 (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)
မန္တလေးတိုင်း၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကန်ရွာနှင့် မိုင်ဝက် ကွာဝေးသောနေရာတွင် ဗဟုဇန ဟိတကာရီ တံတားကို နိုင်ငံတော်မှ ပံ့ပိုးငွေများနှင့်အတူ အများပြည်သူ လှူဒါန်သော အလှူငွေ များဖြင့် (2016)တွင် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး၊ ထိုတံတားဘေးတွင် (2300)ပေရှိသော မြေနေရာတွင် ဣစ္ဆာသယ ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော်ကို ထိုင်ဝမ် ဒကာ ဒကာမများ၏ လှူဒါန်းငွေတို့ဖြင့် (6.11.2014)တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့၍ (10.2.2016)ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ ဆောက်လုပ် ပြီးစီးကာ ထီးတော် တင်လှူခဲ့ပါသည်။
于2016年在集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城) 距離半英里有座巴滬佳那喜塔卡宜橋由政府出資與民眾的善款興建完成。距離此橋的2300英呎處在2014年11月6日來至台灣佛友的善款建了滿願佛塔。于2016年2月10日完成佛塔開光及供塔傘典禮。在佛塔周圍2300英呎直徑佛地正籌備圍蘺及出入正門的施工。
သံပန်းတံတိုင်း ကမ္ပည်းထိုး ၁ခန်း ၅သောင်းကျပ်​။
(三) 蓄水池建設 (集斌稈村及附近村莊, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)
(1) 滿願佛塔 Mingalar 池
(2) U Yon池
(3) Thipinva 池
(4) Bahtoo 池
(6) Kyautakhar 池
(၇)အိုးပုံကန် တို့ကို တူးဖော်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင် ကန်သင်း(ကန်ဘောင်)ဆည်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
(၈) ဂဲကြီးတောင်ကန်တို့ကိုလည်း ဆက်လက်ကာ ပြန်လည် ပြုပြင် တူးဖော် ဆည်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
(8) 繼續為Gei Kyi Taung池修護 .
(1) 滿願佛塔內 水井
(2) 西院 水井
(3) 中村國/高中 水井
(4) …. U Shwe水井
(၅) ဣစ္ဆာသယ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်ကြီး၏ လမ်းညွန် ဆိုင်းဘုတ် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော ကြက်တက်တောရွာ ရေတွင်းတို့ကို တူးဖော်၍ ရေစုပ်စက်၊ အုတ်ရေကန်တို့နှင့် အတူတကွ လှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။
(5) 在滿願佛塔指標附近為附近為水所苦的村民 , 水井已捐抽水機及水池。
(၆) ဇီးပင်ကန်ရွာဦးကျောင်း ရေတွင်းနှင့်
(6) 西院 水井 和
(၇) ဣစ္ဆာသယ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်ကြီး ရေတွင်းတို့ကို ဆက်လက် တူးဖော်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုရေတွင်း ရေကန်အလှူများကိုလည်း သတ်မှတ်ချက်မရှိ။ စေတနာရှိသ၍ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
(7) 繼續為滿願佛塔內 水井 挖地下水。諸位佛友不限額可隨喜功德。
(四)　舊橋重新修／養護, 修善馬路, 電線, 路燈 (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)
於2007年2月9日開始建蓋巴滬佳那喜塔卡宜橋, 在2007年8月17日完成建橋。建橋後7年因洪水橋埻被侵蝕。第二次建橋由政府出資緬幣５仟萬及來自佛友的緬幣８佰萬建設完成。因此, 政府將此橋重新命名為集斌稈橋。
修路, 電線, 路燈
ဣစ္ဆာသယ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်ရှိရာမှ ဣစ္ဆာသယ ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော်မြတ်ကြီး တည်ရှိရာ နေရာသို့ မိုင်ဝက်ခန့် ရှိပြီး၊ ထှိုဣစ္ဆာသယ ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော် မြတ်ကြီးမှသည် ဇီးပင်ကန်ရွာတိုင်အောင် မိုင်ဝက် ရှိပါသည်။ ဣစ္ဆာသယ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်ရှိရာမှ ဇီးပင်ကန်ရွာအထိ ဆိုလျှင် (၁)မိုင်ရှိပါသည်။
路口指標到滿願佛塔有半英里, 滿願佛塔到集斌稈村有半英里距離。從滿願佛塔指標到集斌稈村有1英里距離。此1英里長馬車路能夠使一般的車輛駛入在2017拓寬馬路及挖路旁水溝, 由政府及佛的捐款的完成。繼續將此馬路鋪石頭及從滿願佛塔至集斌稈村接電線, 諸位佛友可以不限額隨喜功德。
လမ်းခင်းကျောက်ကြမ်း ကားတစ်စီးလျှင် (၅)သောင်းကျပ်။
(3) 馬路電線 不限額隨喜功德
(五) 佛法書籍及其他書籍印行 (台灣/緬甸)
(၁) ရတနာဝါသကျောင်း၊ ဘုရားရှိခိုး ဝတ်ရွတ်စဉ် (ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်) (ဂ)ကြိမ် ဓမ္မဒါန လှူဒါန်းပြီးပါပြီ။
(1) 華緬三寶寺課誦本 (巴利文/緬文/中文/英文) 第三版已捐
(၂) ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် ဝတ်ရွတ်စဉ် (ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်) (၂)ကြိမ် ဓမ္မဒါန လှူဒါန်းပြီး။
(2) 11部經(巴利文/緬文/中文/英文) 再版已捐
(၃) အနန္တဂိုဏ်းဝင် ထာဝရမေတ္တာရှင် (၃)ကြိမ် ဓမ္မဒါန လှူဒါန်းပြီးပါပြီ။
(3) 永恆的慈愛 第三版已捐
(4) 短文 再版已捐
(5) 11部經(巴利文/緬文/中文/英文) 第五版已捐
(6) 24 緣課誦本 (巴利文/緬文/中文/英文) 第五版已捐
(7) 後續 滿願佛塔歷史
(六) Golden Land Dhamma School (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)
မန္တလေးတိုင်း၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ ဇီပင်ကန်ရွာတွင် “ရွှေကန်မြေ ဓမ္မစကူးကျောင်း”ကို (6.12.2015) ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခဲ့သည်မှာ (၂)နှစ်ကာလသို့တိုင်ခဲ့လေပြီ။ ရွှေကန်မြေ ဓမ္မစကူး ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများသည်လည်း ယခုအခါ (၁၆ဝ)အထိ တက်ရောက် လေ့လာ သင်ယူလျှက် ရှိပါသည်။
於2015年12月6日成立Golden Land Dhamma School. 學生已有160人。在母國緬甸, 我們必需在歪法尚未滲透萌芽前、正法尚未消失前、有違反戒律的法尚未萌芽前、佛陀所教導的戒律尚未消失前、不守戒律的人們尚未有力量前、遵守戒律的人們尚有力量前，為佛陀所留下的正法及戒律留在新生代的孩子心中、我們應共同來護持佛法學堂。
ဓမ္မစကူးလ်လစဉ်အလှူ။ (သတ်မှတ်ချက်မရှိ။ စေတနာရှိသ၍ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။)
(1) 佛法學堂每月功德 (不限額)
(e) 午餐: 緬幣110,000 (含5位僧及沙彌, 160位學生)
(3) 學堂基金 (不限額)
(4) 學堂使用草席: NT$50/片 ; 預計捐500片
(七) 建設智庫圖書館 (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)
ပညာသမာ အာဘာ နတ္ထိ ပညာနှင့်တူသော အလင်းရောင် မရှိ။ ပညာရွှေအိုး လူမခိုးနိုင်။ စသည်တို့သည် လူ့ဘဝတွင် ပညာအရေးကြီးပုံကို ဆိုလိုပါ၏။ ထို့ကြောင့် ဇီးပင်ကန် ရွာသူ ရွာသားများ၊ ဇီးပင်ကန်ရွာ ပတ်ဝန်းကျင် နယ်သူ နယ်သားများအထိ အသိညာဏ်ပညာ တိုးတတ် ပွင့်လင်းစေရန်အတွက် “ပညာအလင်းစာကြည့်တိုက်”ကို ဇီးပင်ကန်ရွာဦးကျောင်း သိမ်ထဲတွင် ယာယီဖွင့်လှစ်၍ စာအုပ်အဟောင်းများ စုဆောင်းအလှူခံခြင်း၊ စာအုပ် အသစ်များ ဝယ်ယူ လှူဒါန်းခြင်းနှင့် စာအုပ်ဗီဒို၊ စာအုပ်စင်များကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် သိမ်ထဲတွင် စာကြည့်တိုက်ရေရှည် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားရန် မဖြစ်နိုင်တော့၍ စာကြည့်တိုက်လေးကို သီးသန့် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းရန် စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
知識如一絲光線。知識是不會被人偷走的。這是人的一生最重要的。因此, 為集斌稈村民及附近村民能增廣見聞目前在……寺院戒堂暫時開設智庫圖庫書館募集舊書及添購新書及VCD捐贈給圖書館。因在……寺院戒堂內長期開設圖書館已不適合, 因些計畫另尋他處蓋新的圖書館。
(八) 慈愛基金 (集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)
大部份集斌稈村民是很窮苦。在村莊沒有診所, 沒有醫生, 當村民生病時只能到離村莊很遠的鎮就醫。因此當生重病時碰到很多困難。付不起醫藥費的只能在家等待死亡的到來。因此在2015年3月20日成立慈愛基金將募得的資金購買二手車開始幫助需要幫助的人。有錢出錢, 有力出力, 村民自食其立將病人送醫。有能力的村民酌收油資, 沒能力的村民免費幫助他們運送至最近的鎮上醫院就醫。
၁။ သုဿာန်သင်္ချိုင်းတွင် သံဝေဂယူ မရဏာနုဿတိဘာဝနာပွါး ဆုတောင်း အမျှဝေရန်အတွက် နေရာ မလုံလောက်၍ နေရာ အဆောက်အဦး တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ရန်၊
緬甸佛教徒的習俗, 為死去的親友誦經, 祈福, 迴向, 供養僧團午餐及袈裟及送終的親友請客。因此, 幫助留下的窮苦喪家捐一半或全額的費用。
ဆက်လက်၍ ထိုတောင်မအိုတောင် ရှေးဟောင်း ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော် ဘေးတွင် တံခွန်တိုင်၊ ဇရပ်၊ နဂါးရုံဘုရား၊ ဗောဓိညောင်ပင်နှင့် ပလ္လင်အုတ်ခုံ ဂြိုယ်တိုင်ဘုရားတို့ကိုလည်း ဆက်လက် ဆောက်လုပ် ပူဇော် လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
在老山上有座百年老舊的滿願佛塔, 已修善完成。此佛塔為歷史最悠久, 地理位置最高的山。要到山不要說是車子連牛車也上不去, 只能用雙腳爬上去。因此, 修善老山舊滿願佛塔時, 物資只能用人力搬運上山。于2016年6月20日完成供塔傘典禮。繼續還會在佛塔周圍健圍蘺及涼停。
Tawya 寺, Phayar Lay Gone, Ancient 佛塔
為修善因大地震垮下來的莆甘佛塔, Lawkananda 佛塔已捐緬幣500,000, Htiilominlo 佛塔已捐緬幣500,000。
集斌稈村民都是佛教徒, 在家都有佛桌。在佛桌上獻花, 供茶水及供養但不一定每家都有佛相。因此, 村民能在家有佛相頂禮, 已佈施346樽佛相。不僅為集斌稈村民, 也為其他村莊的村民也有佈施佛相。
(10) 教育功德款(集斌稈村, 東達鎮, 曼德勒(瓦城), 緬甸)
以前在集斌稈村只有小學學校。大家的努力幫助下已開始開設中年級(合作)學校。合作指私人開設目前政府還沒有核準。也沒有得到政府的100%資助。因此, 學校建築, 老師的薪資等由村民集資來成立此合作中學。且已捐款讚助給學校所需要的天花板, 圍牆, 書桌椅等。
種種的弘法事項, 邀請大家隨喜善業, 佈施護持填滿佈施波羅密。